Kooxo hubeysan oo bambaanooyin ku weeraray guriga gudoomiyihii hore ee Howlwadaag. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAKooxo hubeysan oo bambaanooyin ku weeraray guriga gudoomiyihii hore ee Howlwadaag.
Kooxo hubeysan oo bambaanooyin ku weeraray guriga gudoomiyihii hore ee Howlwadaag.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxyo, xalay lagu weeraray hoyga Muqdisho uu ka degan yahay Maxamed Abuukar Jacfar oo mar soo noqday Gudoomiyihii Degmada Hawlwadaag, iminkana ah Sarkaal ka tirsan hay’adda Nabad Suggida Somaliya.
Qaraxyada oo ahaa bambooyinka nooca gacanta laga tuuro, ayaa wararka waxa ay sheegayaan inuu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah.
Guriga Jacfar ayaa wuxuu ku yaalla Degmada Hawlwadaag, gaar ahaan nawaaxiga Iskuulka Dhagaxtuur, wadada ka baxda Isgoyska Dabka ee dhanka Bakaaraha aada, waxaana la sheegay raggii qaraxyada ku weeraray hoyga Jacfar inay baxsadeen.
Warbaahinta ayaa sheegaysa qaraxyadaasi inay ku geeriyoodeen laba ruux oo shacab ah oo ka agdhawaa guriga Jacfar, halka ruux kalena uu ku dhaawacmay.
Afhayeenka Wasaaradda amniga C/casiis Xildhibaan ayaa sheegay ciidamada ammaanka inay tageen goobta ay wax ka dhaceen, inkastoo aysan ku guulaysan soo qabashada raggii falkaasi gaystay.
Maxamed Abuukar Jacfar ayaa ah Sarkaal ka tirsan Nabad Suggida Soomaaliya, dhawaana waxaa laga qaaday xilka Taliyihii hawlgalada Ciidamada NISA.
Ciidanka Badda oo u dabaal degaya Sanad guuradooda 53-aad
41,087 total views, 1,840 views today
41,087 total views, 1,840 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
41,160 total views, 1,840 views today
41,160 total views, 1,840 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
41,172 total views, 1,840 views today
41,172 total views, 1,840 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
41,197 total views, 1,841 views today
41,197 total views, 1,841 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
41,225 total views, 1,838 views today
41,225 total views, 1,838 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]